गोविन्द गौरवित र सरकारको सुली – ToplineKhabar
March 23, 2017 toplinekhabar0Comment
काठमाडौं १० चैत्र । गोविन्द गौरव हो । गोविन्द जङ्गे खम्बा हो । उत्पीडीत राष्ट्रको राष्ट्रयता हो । मातृभुमीको रक्षार्थ खटिएको इमान्दार सिपाही हो । नालापानीको विगत हो । तिलाठीको वर्तमान भन्दा एक कदम अगाडी हो । खोक्रो राष्ट्रवाद होइन, सस्तो लोकप्रीयता होइन, अवसर कदापी होईन । इमानमय आदर्श हो । सतिसाल झै उभिएको राष्ट्रवादी व्याक्तीत्व हो । यो नै समग्र राष्ट्रयताको परिभाषा हो ।
उ ढल्यो नढल्नु पर्ने, उ जलेर खरानी भयो नजल्नु पर्ने , विस्तारवाद झुक्ने थिएन । लोभलालचले रोक्ने थिएन । सत्ताको सौदाले उसलाई छुदैन पनि । विस्तारवादीको वदनाम पुर्ण कर्कुतलाई रोक्न सक्ने गधाधारी भिम जस्तो विरताको प्रतिक थियो । सीमारेखामा अडीएको सगरमाथा जस्तो अडीग निसानी थियो ।
विस्तारवादी दलालहरुको ज्याजतीका विरुद्ध प्रतिकार गर्दा गर्दै एक्लै ढल्न तयार भयो । ममतामयी वुढा आमा—बुवा , प्रेमको महासगर जिवन संगीनी र स्नेहका कलीला कोपीला तिन छोरी टुहुरा सुकुमवासी वस्तीमा छोडेर विरताको पथमा लम्कीयो । गणतन्त्र नेपालको सिमा रक्षामा विरगति प्राप्त गर्नै पहिलो सहिद बन्यो ।
सरकारले राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरेर देखाएको लोकलाजपुर्ण व्यवहारले गोविन्दको विरतालाई होच्याउन खोज्यो । सिमाना सहिद भएको विर नेपालीको अन्त्यष्ठी गर्न प्रशासनले पठाएकोे फोहोर फाल्ने गाडीले उसको सहादत स्विकार गरेन । सके कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री जानु पथ्र्यो नसके गृहमन्त्री जानु पथ्र्यो । ७ नं. प्रदेश आफ्नो ठेक्का ठान्ने शेरवहादुर देउवा, टिकापुरमा रहेका भिम रावल र अत्तरीया आफ्नै घरमा रहेका लेखराज भट्ट समेत सहभागी भएनन् । रिवन काट्न मेची देखी महाकाली हेलीकप्टरमा उडीरहनेहरु, पार्टी झण्डा वोकेर मसान घाट धाउनेहरुलाई किन गोविन्द गौतमलाई राष्ट्रिय झण्डा ओडाएर सम्मान गर्ने साहस आएन । कैलाली र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत सहभागी नभएको तिम्रो राष्ट्रिय सम्मानले मेरो सिमानामा ढलेको विर सहिदको सम्मान होईन अपमान गर्दछ ।
सुकुम्वासी वस्ती वस्ने गोविन्द श्रमीक हो । तिम्रो क्षेत्रीय उत्पीडनले पछि पारेको होनाहार योद्धा हो । रोजीरोटीको लागी अरव धाउछ सिमा रक्षा गर्न नेपाल आउछ । जङ्गे पीलर झै ठिङ्ग उभिन्छ । जनताको सिपाही हो र त चोक चोकमा श्रमजीवी जनता फुलमाला लिएर मलामी भए । धित मरुन्जेल नारा लगाए, “भारतिय विस्तारवाद मुर्दावाद” । “महान सदि गोविन्द अमर रहुन ” । तिमीले यो नारा कसरी लगाउन सक्छौ, यो जनताकोे नारा हो । तिमी जनताका नेता होइनौ दलाको कटपुतली हौ । तिमी किन आउछौ र उसको विरताको कद उचो पार्न तिम्रा मालीकको कासनले तिमीलाई अन्तै पठाइदियो ।
तिमीहरु धेरै पटक किनियौं र बेचियौं पनि । मुल्य पैसामा लिन्छौ र दिन्छौ पनि । महान सहिद गोविन्दलाई दश लाख दियौ भनेर हल्ला धेरै गर्यौ जति उसको विरतामा गौरव गरेनौं । तिम्रा सहिदको सुचीमा हाम्रो गोविन्द गौतमको नाम पनि थप्यौं । नाम मात्रको राष्ट्रिय सम्मान पनि दियौ । तिम्रो षड्यन्त्रको सुलीमा हाम्रो मातृरक्षक चढ्दा दिल दुखेको छ । सहिदको सुचिका लागी मात्र होईन,सहिद शिक्षाका लागी हो । नविन चेतनाका लागी हो । सहिद वदलाका लागी शाहास पनि हो ।
त्यसैले, गोविन्द राष्ट्रप्रेम जगाउने नैतिक शिक्षा हो । गोविन्दको सहादत सिमा रक्षा गर्न प्रेरित गर्ने आन्दोलन हो । तिम्रो नजरमा पर्न नसकेको सुदुरपश्मिमा जन्मियो। तिमीले जसलाई ढोग्छौ उसैसँग मुकाविला गर्यौ। सहिद गोविन्दको सपना अतिक्रमीत भुभाग फिर्ता गराई स्वाभिमान पुर्ण नेपाल बनाउनु हो । सहिद गोविन्द गौतमको सपना पुरा गर्न सीमारेखामा काँडेतारबार लगाउने र सिमा व्यवस्थापन पद्धति मध्येको नियमन सीमा प्रणाली (regulated border system) लागु गरी सिमा अतिक्रमण रोक्न ७ नं. प्रदेशका जनता सरकार सँग माग गर्दछौं । यो नै गोविन्द गौतम प्रतिको उच्च सम्मान हुनेछ ।
← माओवादी केन्द्रले दियो ६ लाख – सहिद गौतम परिवारलाई
महँगियो निर्माण क्षेत्र : एक करोडमा बन्ने घर अहिले कतिमा बन्ला ? →